Wasiir la xanuunsan COVID 19 oo xoog looga saaray Diyaarad ku sii jeeday Nairobi - Awdinle Online
Mid ka mid ah Rakaabkii Diyaaradda ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadkii Wasiirka xoogga uga saaray Diyaaradda.
Waxa uu intaasi ku daray inay u muuqatay in Shaqaalaha Garoonka ay Heshiis Hoosaad xeer jajab ah (compromise) la galeen Wasiirka, si uu u raaco Diyaaradda.
“Shaqaalaha Diyaaradda waxay inoo sheegeen inaysan arrintaasi waxba ka qaban Karin, maadaama ay Saraakiisha Ammaanka ee Garoonka ku fashilmeenm inay Wasiirka ka joojiyaan inuu raaco
Diyaaradda” ayuu sii raaciyey mid ka mid ah Rakaabka.
Sarkaalku waxa uu intaasi ku daray inay la fajaceen, kadib, markii uu Wasiirka dib ugu soo laabtay Xafiiska Wasiiradiisa, isla markaana aysan ka war haynin inuu la liicayo xanuunka COVID 19.
“Waxaan la yaabnay markii uu Wasiirka dib ugu soo laabtay Wasaaradda, Annaga kama war haynin inuu Wasiirku la xanuunsanaa COVID 19, waayo arrimahaasi waxay ahaayeen Qarsoodi” ayuu yiri Sarkaalkaasi oo aan fasax u haysanin inuu la hadlo Saxaafadda.
Sarkaal ka tirsan Ammaanka Garoonka Diyaaradaha ee Jubba International Airport waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdadaasi, isagoo xusay inay sir tahay inay wax ka qabtaan arrimahaasi oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, Wasiirka Arrimaha Samafalka iyo Maareynta Masiibooyinka ee dalka Koonfurta Suudaan, Peter Mayen Majongdit waxaa la sheegay inay maalmihii la soo dhaafay uu muran kala dhexeeyey Ganacsade uu ka amaahday 4 gawaarida yaryar ee nooca raaxada.
Waxaa Turjumay: Ustaad Nuradin Haji,
Previous articleXildhibaan sheegay in la carqaladeynayo heshiiskii Rooble & Musharixiinta
Next articleJubbaland oo Amar deg deg ah soo saartay